Intengiso kunye neNtengiso ye-Psychology infographic
I-Sneaky Psychology yeNtengiso
NgeCawa, ngoJulayi 17, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Le infographic entle evela kwi-BuySellAds, ebizwa I-Sneaky Psychology yeNtengiso. Okunye koku ayisiyentengiso nje, ikwalicebo lokuthengisa uphawu ngokubanzi. Ndidla ngokujonga intengiso njengesiganeko… okanye ikhonkco.. kodwa ukuThengisa kuko konke ukucwangcisa kunye nesicwangciso esikhokelela kuphuhliso lweNtengiso.
Ngamnye wethu uphantsi kohlobo lwe-3,000 ukuya kwi-10,000 yokuchazwa kweempawu yonke imihla ngeentengiso zeTV, iibhodi zeebhodi ezingaphandle, iibhena zewebhusayithi, kunye nezikipa zabamelwane okanye iikomityi zekofu. Kuba sizaliswe ziintengiso, abathengisi bazobe uphando lwamva nje lwengqondo kwaye basebenzise iindlela ezahlukeneyo zokubamba umdla wethu kunye nokufumana ukuzithemba kubathengi bethu.
Ngaba ucinga ukuba ubuqhophololo obu? Okanye ngaba idlala nje kwinto esiyifunayo sonke? Sifuna ukuyila ngakumbi… ukuba ukuthenga iApple kusinceda sikholelwe ukuba sinjalo, ingaba kubi kakhulu? Kwaye, ngesimbo esiphakamileyo sika-Apple sehardware yabo - ngaba ngekhe bathenge iApple ngakumbi, nangayiphi na indlela? Ke… xa ujonga emva… ingaba abasebenzisi be-Apple bayile ngakumbi? Ndicinga ukuba banokuba njalo!
Douglas Karr Sunday, July 17, 2011 Thursday, October 27, 2011
Ividiyo: Iifom zeWebhu kunye namaphepha okufika kunye neFomstack
Ndinetyala leMithombo yeendaba yeNtlalo
Jul 17, 2011 ngo-11: 27 PM
Ndicinga ukuba i-Apple ineyona ntengiso ibhetele kwihlabathi. Iimveliso zabo ayizizo zodidi kuwo onke amanqanaba okwangoku ukuba ilogo ka-Apple iye yahlanjwa kwengqondo kwizigidi kwaye ngokokubona kwam yeyona nto ibalaseleyo kubuchwephesha kwihlabathi okwangoku.
Uphawu lwentengiso lwe-Android (ngeHTC kunye neeklones) liqala ukuba nefuthe elifanayo kwimakethi yefowuni ye-OS kwaye i-Samsung / iSony inezimpawu ezithile ezikrelekrele kodwa ayibonakali iphumelele kwintengiso yase-US kodwa yomelele kakhulu e-Asiya.
Izigidi zamakhwenkwe abalandeli beApple zithetha ukuba amaza omoya oLuntu azaliswe ngabantu abaxhasa uphawu lwentengiso kwaye nanini na xa iApple inesiphoso semveliso bayakhawuleza bakhusele iApple de iApple isombulule ingxaki (Umz. Ingxaki yengxaki ye-eriyali nge-iphone4)
Jul 22, 2011 ngo-4: 58 PM
Uninzi lwabantu lubonakala lungaqondi kwaphela ukuba imeko yemidiya kunye nemfundo zinempembelelo njani kwindlela abaziphethe ngayo. Ngethamsanqa ayisebenzi kuye wonke umntu. Kufuneka siyiqonde into ekhuthaza abathengi abanokubakho ukuba baxhamle abathengi bethu; Nangona kunjalo, iinkampani ezininzi zithathe oku kude kakhulu ngentengiso yesondo.
Ukungahoyi kwethu kunokubonwa kwindlela esiboniswa ngayo yimibutho emininzi njengeebugs okanye 'izixhobo'. Kukho imoto ekumgangatho ophezulu eqhuba ngoku eHulu ebonisa zonke iintlobo zabantu ezihleli endleleni ziyipeyinta ngeebrashi ezincinci okanye ngevayimitha okanye ngokukhwela kwisitrato ukuze zihlambe iintaka. Zombini ezi zinto zibonisa ukuba ezi nkampani zicinga ntoni ngathi: iincukuthu okanye amakhoboka.
Ndonwabile ukuba le infographic ikhankanya iilogo. Ndikhuthaza abantu ukuba baqwalasele uphawu lweelogo, kwintengiso nakusasazo lweendaba. I-YouTube yindawo ebalaseleyo yokufumana iividiyo ezenza ukuba sonke sazi ngakumbi ukuba iilogo zithetha ntoni. Zama ukukhangela uphawu lwe logo.